Tena mbola betsaka ny asa fanadiovana eto amin'ny firenena
vendredi, 10 août 2018 10:18
Ohatran'ny petit village na tanàna kely io toerana misy ny mpanao politika io. Mifankahalala avokoa ny rehetra, miresaka tsara, tsy misy miady izany, miara-misakafo mihitsy aza. Ny mpanohana any no miady mifamono sy mifandrangitra, eny miady mivady sy mifanatsatoka antsy sy mifampitifitra basy mihitsy, fa ny mpitarika tsy misy mikorontana izany.
Izay no tsy mba hinoako io resaka fampihavanana ny mpanao politika io, fa fanasaziana ireo nangalatra sy ny mpanao kolikoly no mila atao, dia arahina sy ampiharina ny Lalàna, fa tsy ekena izany tsy maty manota izany, ka hialokaloka ao ambadiky ny fampihavanana fotsiny, ka mody miala tsiny kely ny fahadisoana teo aloha.
Izao dia fantatra fa miketrika ny hampihemotra io fifidianana io reo.
Maro koa ireo kandida lazaina fa vaovao, no ry zareo ihany no mamatsy vola azy, efa misy aza ny mampanamboatra tee-shirt 3 000 000 isa, raha kely indrindra izany dia any amin'ny 6 millions de dollards any, na 18 miliara ariary na 90 milliard fmg. Aiza no ahitan'ny kandida an'izany, fa resaka ka atao.
Fantatra koa fa tao amin'ny CENI dia nisy logiciel efa nisy résultat n'ny 2e tour, ka sendra hita ilay izy, dia nolazaina fotsiny hoe saika nanaovana test, angaha tsy azo natao hoe Candidat 1, Candidat 2 ny test fa tsy maintsy ny anaran'ilay olona no natao test.
Efa paika efa hita daholo teto izany hala-bato hatramin'izay izany.
Hitohy ary hihamaro io halabato io, ankoatran'ny kolikoly ividianana maire, Chef de région, Chef district, Filoham-pokontany, membre bureau de vote. Samy manome vola, miantso hisakafo, mampanantena avokoa.
Efa 20 000 ariary izao ny taux indemnité raha délégué bureau de vote hisolotena ny antoko anara-maso ny biraom-pifidianana, ka raha 25 000 ny isan'ny bureau de vote, dia mila miomana amin'ny 500 millions ariary na 2,5 milliard fmg izany raha kely indrindra ny kandia amin'ny vola omena ny délégué.
300 - 500 milliards fmg izao ny teti-bolan'ireo kandida milaza azy manam-bola ireo izao.
Tsy resaka hoe ny tena tsy manana an'izany no olana, fa ny hoe avy aiza izany vola izany, ary inona ny harem-pirenena nagalarina sy natao antoka ary namidy ho an'izany.
Mora ny miteny hoe efa nihomana efa ela izahay fa vavan'ny tsy manam-bola izany.
Eny tsy manam-bola nangalarina izahay, tsy manam-bola nivarotana Tanindrazana.
Fa izahay kosa tsy hijery fotsiny ny Firenenay ataonareo fanananareo manokana ka izay tianareo atao no ataonareo eto.
Izany ny kilalao maloton'ity fifidianana ity.
Mila fanovana goavana.